Mmegharị | Law & More | Eindhoven & Amsterdam
Ọ bụrụ na gị na mmadụ nwee nghọtahie, ịchọrọ idozi esemokwu ahụ ozugbo enwere ike. Mgbe mgbe, esemokwu na-eme ka mmetụta uche na-aga elu, na nsonaazụ nke na ndị otu abụọ ahụghịzikwa ngwọta. Ogbugbu nwere ike ịgbanwe nke ahụ. Onye ogbugbo bụ mkpebi ngọngọ nke esemokwu na enyemaka nke onye ọka ikpe na-anọpụ iche: onye ogbugbo. Enwere ụfọdụ ụkpụrụ dị mkpa maka idozi mmadụ: afọ ofufo na izu nzuzo. Otu abụọ a na-anọdụ ala gburugburu tebụl afọ ofufo ma nwee mmụọ na-eme ihe kwekọrọ. Na mgbakwunye, ndị otu abụọ ahụ na-eme atụmatụ idobe nzuzo. Nke a metụtakwara onye ogbugbo ahụ. Onye ogbugbo ahụ na-eduzi mkparịta ụka niile, na-enyocha usoro ahụ ma na-enyere gị aka ịchọ ngwọta dị mma.
ANY A na-enyere unu aka
Ya na Law & More to ga-amalite na esemokwu ahụ
> 1. Gini bu nmeghari anya?
> 2. Gịnị kpatara esemokwu?
> 3. Mgbe nke dị n’usoro?
> 4. Gịnị kpatara ya Law & More?
1. Gini bu nmeghari anya?
2. Gịnị kpatara esemokwu?
Gba ụka nwere ọtụtụ uru. E nwere ụzọ dị iche iche e nwere ike isi mee ihe n’usoro mgbapụ karịa n’oge usoro iwu. Otutu mgbe enwere ike idozi nsogbu nke mejuputara ndi nile sonyere na ya.
The Law & More ndị ogbugbo anaghị ewere ọnọdụ na anaghị ewere mkpebi ọ bụla. Will ga-eme nke a n'onwe gị. Will ga-ekerechi òkè anya ma mechaa kpebie ihe ga-esi na ya pụta. Ndị mgbasa ozi anyị ga na-eduzi ma kwado gị na ịme nke a. Otu uru dị mkpa dị na ya bụ na otu abụọ ahụ ga-anọ n'ike nke ihe ngwọta ya na mmekọrịta gị agaghị emebi emebi adịghị mkpa. N'ezie, nke a bụ ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na unu abụọ nwere ụmụ n'ihi na unu ga-ekwurita ma kwurịtara onwe unu mgbe ịgba alụkwaghịm ahụ.
3. Mgbe nke dị n’usoro?
Mmekọrịta bara uru maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ esemokwu na esemokwu niile, yana onwe ya yana ụlọ ọrụ.
Nwere ike, dịka ọmụmaatụ,
• orgba alụkwaghịm
• Mmemme ịkpọtụrụ
• Okwu ezinụlọ
• Nsogbu nke imekọ ihe ọnụ
• Esemokwu ọrụ
• esemokwu azụmahịa - nl
4. Gịnị kpatara ya Law & More?
• Ekwenyesiri gị ike na ị ga-elele nke ọma, ma n'ihe gbasara iwu dịka n'oge nnọkọ nke mmegharị ahụ.
• Gị na gị Law & More Onye ogbugbo ị ga-atụle ụzọ niile na akụkọ banyere esemokwu ahụ na mbụ. E mechaa nke ahụ, ị ​​ga-ekwu maka aro ndị ga-enyere gị aka idozi ya.
• Gị Law & More onye ogbugbo na-eduzi ndụmọdụ ahụ, na-ekwe nkwa enyemaka nke iwu na nke mmetụta uche ma na-eburu n'uche ọdịmma nke abụọ ahụ n'oge oge izu.
• N'oge usoro mgbasa ozi niile ga-elebara akụkọ gị anya, mmetụta gị na mmasị gị.
• Na ngwụcha nke usoro ogbugbu gị Law & More Onye ogbugbo ga-agba mbọ hụ na nkwekọrịta niile emezigoro n’etiti gị na ndị nke ọzọ, ka aga-edezokwa nke ọma na nkwekọrịta edem ede ede.